Soomaalida Norway oo lacag u uruuriyay Waalalihii Soomaaliyeed ee Dhibku kasoo Gaaray Qaraxii Soobe – Radio Muqdisho
Jaaliyada Somaliyeed Ee Dalka Norway ayaa ururiyay Dhaqaqaale lacageed oo gaaraya 1.090.574 kun oo Norwegian ah una ddhiganta 128.162 kun oo Dollarka Mareykanka ah .
Lacagtan oo ay iska soo ururiyeen guud ahaan Somalida degan Norway uguna tala galeen in la gaarsiiyo Ehalada Dadkii ku dhintay.
kuwii hanti waayay iyo kuwii ku Dhaawacmay ayaa waxa ay Gudiga gurmad Qaran ee Norway sheegeen in lagu Hagaajiyay Gudiga Gurmadka Qaran ee Dowlada Fedaralka Somaliya.
Waxaana uririntan dhaqaale intii ay socatay si xoogan ugu qeyb qaatay Mazjidka Towfiiq ,Ururka Ardayda Somaliyeed hay’ada Xanaano oo AKoonkeeda lagu Ururiyay lacagta iyo Warbahinta oo uu ugu Horeeyo TV Qaranka Somaliyeed Norway.
waa markii labaad ee Somalida Norway ka qeyb galaan Qaaran Qaran
kal hore ayay aheyd markii dhaqaale loo ururiyay Dadkeenii Abaaruhu ku dhuftteen kuwaasoo jaliyada ay gaarsiiyay lacag cadadeedu u dhiganto tan maanta
Xasan Siciid Rasta